Mimhanzi yeIOS yakavandudza zvinoshamisa mavhiki mushure mekutanga kwayo | IPhone nhau
Mharidzo yeiyo iPhone 7 inotarisirwa kuve inguva yakasarudzwa kuvhura Apple nyowani sisitimu yekushandisa, sezvazvakaitika pane dzimwe nguva zhinji. Kubva paruoko rweIOS 10 unouya nhau dzakakosha kuIOS Music application, uye ndezvekuti dhipatimendi rinotarisira ichi chikumbiro rakabvuma zvikanganiso zvekuvandudza izvo zvaswededza kubvira pakauya Apple Music pakupera kwaJune wegore rapfuura. . Sezvo isu tichigara takangwarira, tanga tichishandisa iOS 10 Music kwemazuva mashoma kuti tikwanise kukuudza izvo zvatinoona. Ichokwadi ndechekuti Apple yaita basa rainofanira pamwe nechishandiso, zvisinei nezvikamu zvekugadzira, haina kumbonaya kune wese munhu yaanofarira. Tinotarisa kuMimhanzi yeIOS 10, chii chichauya.
Ichokwadi ndechekuti iyi nyowani yemumhanzi application yeIOS iri kutisiya isu nekuravira kwakanaka mumiromo yedu. Apple yakanga isina kungoomesa zvisina kufanira kunyorera, asi zvakare yaive nematambudziko aive asingafungidzike kune vashandisi veIOS, kusaita zvakanaka uye kuwandisa nguva dzekutakura mukushandisa kwechizvarwa. Ngatitarisei iyo nyowani yeMusic app muIOS 10, maonero edu anogona kuita kuti iwe usarudze pakati peApple Music kana Spotify.
1 Yakagadziriswa, yakapusa uye inonzwisisika dhizaini, Apple brand
2 Haasi ese mufananidzo, kuvandudzwa kuita
Yakagadziriswa, yakapusa uye inonzwisisika dhizaini, Apple brand
Iko kunyorera kwaive kuri kuchema chaiko nekuda kwayo, kwaida imwe dhizaini shanduko kuti iwedzere kushanda. Muchokwadi, chimwe chezvikonzero chikuru nei vashandisi vakapedzisira vasarudza Spotify kunyangwe pavakaedza Apple Music yemahara chaicho chaive mushandisi mushandisi. Apple Music yakaratidza mushandisi interface umo isu hatina kungowana chete ruzivo rwudiki muchikamu chimwe nechimwe, asi zvakare zvaidikanwa kufamba zvakawanda pakati pemamenyu akasiyana kuzadzisa kubereka uko mushure mezvose zvaive zvakafanana nenguva dzose.
Kune rimwe divi, mutambi aramba achichengetedza iwoyo maitiro, kunyangwe hazvo vazhinji vakashora manyorerwo aakaratidzwa. Ikozvino iyo iOS 10 inoratidza tabo nyowani yeControl Center yakapihwa chete kune multimedia kushandiswa (uye zviri pachena kuti yakashandurwa kuApple Music), zvese zvinotaridzika kunge zviri kureruka. Izvo zvakanaka, hatigone kuzviramba. Nekudaro, kuwedzera kwefonti uye pamwe nekuwedzeredzwa saizi yemabutiro haigone kugonesa vese vashandisi, zvisinei, ichokwadi kuti ikozvino chifananidzo chinokunda pakutsvaga, zvinyorwa zvipfupi asi zvakakura, izvo zvinobatsira kuverenga kwako. Ini pachangu, ini ndinoshandisa mutambi mumota, uye Spotify, nekutenda kune yayo mushandisi interface, yakandibvumidza ini kuti ndichinje nziyo uye zvinyorwa zvekutamba nekukurumidza ndichityaira (ine chishandiso chakasungirirwa nebhureki, zveshuwa).
IOS Music yakakwereta ichi chiito kubva kumavara makuru uye zvakakurisa zvemukati zvemifananidzo, kuti tikwanise kuziva runyorwa rwedu nekukurumidza, tinokanganwa zvinyorwa, tinofamba pakati pe "icons" uye iwo ma icon ndiwo mabutiro eedu maalbum kana zvinyorwa. Icho chiri nyore, hunhu hwakanyanya.
Haasi ese mufananidzo, kuvandudzwa kuita
Zvisinei neyekutanga uye yazvino mushandisi interface, inogona kana isingade, isu tinowanawo chichemo chikuru. Iko kunyorera IOS Music yakatambura nehutsinye hwekuita kuderera nekuuya kweApple Music, kunyangwe tikamisa iyo sarudzo. Nguva dzekuregedza dzaive nekurebesa zvisina basa, zvichikonzera kuora moyo kwevashandisi vazhinji, tisingataure kuti mimhanzi yako neApple Music zvakaguma zvabatanidzwa nenzira yausingazive kuti wanga uchishandisa yako data rate kana kuti kwete. Izvi chaizvo hazviitike futi, zvisinei, ivo vakachengeta iyo "Unganidzo" basa kunyangwe iri chaiyo kukundikana
Iyo iTunes vhezheni haina kutambura zvakafanana mugumo, uyo kunyangwe paine akachinja zvishoma dhizaini, ichiri kuita senge yakawandisa yechinyakare uye nguva dzekurodha hadzina kureba zvisina basa. Zvekuti mavhezheni atakaedza haana kunyatso tsanangura zviri pachena, zvisinei, iOS 10 uye neMusic application inotisiya tiine kuravira kwakanaka kwazvo mumuromozvisinei kuti tinoishandisa neApple yekushambadzira mimhanzi sevhisi kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Mimhanzi yeIOS yakavandudza zvinoshamisa mukati memavhiki ekutanga kwayo
Jonathan Mejia akadaro
Ini ndaishandisa Apple Music kwegore uye zvese zvinonakidza, hongu dzimwe nguva zvaitora nguva kurodha nziyo asi hapana chakajairika. Chakazonyatsoita kuti ndigone kusarudza paSpotify ndechekuti imwe nguva ndaifanira kuchinja account yangu ye "Apple ID" uye nekudaro ndisina kumbotarisa mimhanzi yangu yese, zvinyorwa zvangu, mimhanzi yangu isingaenderane "zvakanyangarika", zvese zvakange zvaenda. Ndakafunga kuti nekuisa account yangu yapfuura, dambudziko raizogadziriswa asi, oh kushamisika! Pakanga pasisina chinhu ipapo. Basa rese regore rakangonyangarika. Ini ndinofunga Apple inofanirwa kugadzirisa iyo ruzivo isati yawedzera mabhatani ayo nemazita.
Pindura Jonathan Mejia
Ini ndinogara ndichishandisa Native application yeiyo iPhone kana iPod kuteerera kumimhanzi yandakaburitsa pane yangu kifaa, uye chokwadi ndechekuti iyo yekuvandudza yanga ichityisa. Iye zvino zvinyorwa zvakarongedzwa nearufabheti uye kwete pagore (sezvandaimboita), uye maartist asina mifananidzo muApple Music, anoonekwa aine maikorofoni icon nekumira kune vese, izvo zvinoita kuti kubhurawuza tebhu kunotyisa. "Artists." Kubva pane izvi, ini ndafunga kusandudzira kuIOS 10 pazvinenge zvichidikanwa uye pamwe ndichienda kure nekutenga iPhone nyowani kana iPod, nekuti chikonzero changu chikuru chekuvatenga chaive chikumbiro chemimhanzi chakatsaurirwa kundinyadzisa neichi chitsva.
7 Galaxy Cherechedzo 7 Zvimiro zvandaizoda Kuona Pane Iyo iPhone 7